-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့၊ စီမံကိန်း ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝ… – PVTV Myanmar
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့၊ စီမံကိန်း ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝ…
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့၊ စီမံကိန်း ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးတင်ထွန်းနိုင်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းအရေးမှူးချုပ် ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စ ခရစ်စတင်း ရှရင်နာ ဘာဂနာတို့တွေ့ဆုံ
-ချက်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင်တို့ မြန်မာ့အရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
-ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Chrisrine Schraner Burgener ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ဖို့ ပြည်ဝင်ခွင့်မရသေးစတဲ့ PVTV ရဲ့ ညနေပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 11K Share – 1162
“အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီအနေဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ၂/၂၀၂၁ ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများဖြင့်လည်း ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်”
2021-05-26 at 4:54 PM
သူ့ကိုယ်သူတောင် ပြည်၀င်ခွင့်ရအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ သူကို ဆရာကြီးသွားတင်မှတော့. ဟူး. လုပ်ကြပေါ့ကွာ. မင်းတို့က ရဲတွေပဲ
2021-05-26 at 4:55 PM
Who’s fighting to stop the ongoing atrocities and crimes against humanity?
Are you leadingafighting war to defeat the perps or just reporting and waiting for foreigners to help you out ofadilemma?
• တိုင်းရင်းသားဗမာအဖွဲ့အစည်းစုံစုံညီညီအားလုံးလက္ခံပြီးသားရှိပြီးသား လျန်မုံးဆာခေါင်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်းကိုချောင်ထိုးပြီးအသစ်တခုရေးဆွဲဦးမှာဆိုရင်အန္တရာယ်အခက်အခဲပေါင်းစုံကြားကမရောင်ရာဆီလူးတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ငွေကုန်လူပန်းအချိန်တွေဖြုန်း..နိုင်ငံတကာတရားရုံးအတွက်ရှေ့နေတွေငှား၊ဘတ်ဂျက်လည်းဘယ်လောက်ဝင်ထားပြီးလို့ဘယ်လောက်ဘာအတွက်သုံးထားပြီးဆိုတာချမပြ၊ဆွဲနေတယ်ကူနေတယ်ပဲတွင်တွင်ပြော၊CDM ကိုဘယ်လောက်ချင်းတောင်ကိုဘယ်လောက်ပေးတယ်မပြောနိုင်ရအောင်ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်လား။
They have received no support worth writing home about, no proper liaison, onlyatop down imposition. They started armed resistance early on their own, they’re not fighting for the NLD, and they won’t rename themselves PDF or be subsumed by it.
2021-05-26 at 7:54 PM
2021-05-26 at 9:21 PM
Min Aung Hlaing is playing everyone including those abroad.
Yin Yin Mar says:
2021-05-26 at 9:30 PM
Poe Honey says:
2021-05-26 at 9:36 PM
2021-05-26 at 9:37 PM
JC Stream Flowers says:
2021-05-26 at 10:29 PM
သစ္စာဖေါက်ဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီကိုသာလက်နက်မရောင်းနဲ့ PDFနဲ့ NUGကိုထောက်ခံတဲ့တိုင်းရင်းသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုများများအကြွေးပေးရောင်းပါကူညီပါ။ကိုယ်ကလက်နက်မကိုင်ဘဲတရားထိုင်ပတီစိပ်​ နေ ရင်
2021-05-27 at 12:59 AM
Dankeschön Czech Republic 🇨🇿 🙏
Dankeschön Korea 🇾🇹🙏
2021-05-27 at 4:22 AM
Dankeschön Pb TV Teams 🙏🤙
Noe Noe Kyaw says:
2021-05-27 at 8:23 AM
2021-05-27 at 8:28 AM
ဦး မျိုး says:
2021-05-27 at 9:10 AM
U Min Min says:
2021-05-27 at 11:46 AM
2021-05-27 at 12:32 PM
.အားလုံးစိတ်၏ ချမ်းသာ ခြင်းကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ
U Chit Swe says:
2021-05-27 at 1:36 PM
စကစ၏NO Fly ဇုံသမှတ်မှုကိုတေင်းဆိုထောက်ခံတယ်
2021-05-27 at 1:43 PM
2021-05-27 at 1:44 PM
2021-05-27 at 1:53 PM
2021-05-27 at 1:56 PM
2021-06-02 at 12:40 PM
အသုံး တော်ခံ says:
2021-06-16 at 7:27 AM
မင်းသေတာမြတ်သည် – သီချင်း…